Muhiimka Imtixaanka Onlineka | Martech Zone
Muhiimka ah Imtixaanka Onlineka
Monday, July 9, 2012 Axad, Sebtembar 8, 2013 Douglas Karr
Markaa waxaad ugu dambayntii galisay dhammaan istiraatiijiyaddii suuqgeynta ee internetka oo ay isku dhafan yihiin oo ay si fiican u shaqeynayaan. Waxaad awoodaa inaad cabirto oo aad aragto saameynta istiraatiijiyad kasta si madaxbanaan… hada waa waqtigii la bilaabi lahaa tijaabinta. Xagee ka bilawdaa
From KISSmetrics: Mishiinka iibka ee si wanaagsan loo dhisay waligiis ma dhameystirna ilaa qayb kasta oo ka mid ah la tijaabiyo lana hagaajiyo. Guusha ugu badan, suuqleyda waa inay qoto dheer qotaan oo ay ku tijaabiyaan barta macaamil kasta. Waxa soo socdaa waa tilmaan kooban oo tilmaamaysa waxa ay wanaagsan yihiin in si joogto ah loo tijaabiyo loona hagaajiyo-oo ay ku jiraan PPC, iibsashada warbaahinta, bogagga degitaanka, iyo ololeyaasha emaylka. Uma baahnid inaad wax walba hal mar wada tijaabiso. Ka bilow waxqabadka suuqgeynta waxay soo saartaa soo celinta ugu sarreysa ka dibna ka shaqee sidii aad hoos ugu sii socon lahayd.
Tags: imtixaanka abHagaajinta beddelkaimtixaanka emaylkaimtixaanka foomkadhunkashoImtixaanka bogga soo degayaimtixaanka internetkaBixi halkii gujiiibinta jilitaankasaxiix foomamkaimtixaanka
Xawaareynta Boggaaga oo leh CSS Sprites